संक्रमितका सम्पर्क पछ्याउँदै बितेका १७ दिन – Health Post Nepal
२०७६ चैत २६ गते १४:२१
चीनमा पिएचडी (विद्यावारिधि) अध्ययनरत ३२ वर्षे युवा नेपालमा पहिलो पोजेटिभ प्रमाणित हुँदासम्म अहिले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई धेरैले शायद चीनको मात्रै चासो ठाने।
गएको माघ १० गते नेपालमा पहिलो कोरोना केस घोषणा भइरहँदा कोभिड–१९ ले चीनमा २६ जनाको मात्रै ज्यान लिएको थियो। दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, मकाउ, थाइल्यान्डलगायत मुलुकमा मात्रै सक्रमण भेटिएको थियो।
अहिले संसारका २ सय ९ देश यो भाइरसविरुद्ध साझा लडाइँमा छन्। सर्वशक्तिमान मुलुक यो भाइरससँग पराजितजस्तै छन्। भाइरस नियन्त्रणमा राखेका वा भाइरससँग भागिरहेका दुवैप्रकारका देश अहिले संक्रमित र तिनको सम्पर्क पहिचान (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) गरी परीक्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनबाटै रोगविरुद्ध लडिरहँदा समेत आसातीत नतिजा आउन सकिरहेको छैन।
नेपालमा पछिल्ला संक्रमण भेटिएका अधिकांश व्यक्ति आएका हवाईजहाजमा सवार केही र स्थलमार्गबाट आएकासँग जोडिएकाको सम्पर्क पहिचान निकै कठिन भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जिपिएस प्रणाली लागू भएको, सहरलाई सिसिटिभी निगरानीमा राखेका र कडा कानुन भएका देशले सम्भावित संक्रमितलाई सम्पर्कमा ल्याउन र चाहे जसरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सके पनि नेपालमा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
झन् नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति पहिचानको कामको जिम्मेवारी प्रशासनको नेतृत्वमा भन्दा स्वास्थ्यकर्मीका भरमा छाडिँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि राज्यप्रणालीका जटिलतामा जेलिएको छ।
अर्कोतिर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सम्भावित संक्रमितहरू कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीदेखि, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकारका निगरानी र हैरानीबाट भाग्दै हिँडेका उदाहरणसमेत छन्।
चीनसहित विश्वका धेरै देशमा फैलिसकेको र ती देशबाट नेपालमा बेपर्वाह ठूलो संख्यामा भित्रिरहेकाहरू समयमै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्दा संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा फितलो ट्रेसिङले झन् चिन्ता थपेको छ।
पहिलो केस देखिँदासम्म ती युवासँगै एउटौ उडानमा आएकाहरूको पहिचानमा कुनै ध्यान दिइएन। पहिलो संक्रमित भेटिएको ६९औं दिनमा फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी १९ वर्षे युवतीमा दोस्रो संक्रमण प्रमाणित भएसँगै बल्ल सरकारले संक्रमितका सम्पर्क पहिचान सुरु गरेको थियो। यो आधारमा सम्पर्क खोजी सुरुवात भएको १७ दिनवितिसकेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) का अधिकारीहरू संक्रमितसँगै आएकाको ठेगाना पत्ता लगाउने, सम्पर्क स्थापित गर्ने, प्रत्येक दिन स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र परामर्श दिने काममा खटिइरहेका छन्।
उनीहरूले पहिचान भएकालाई लक्षण देखिएमा तत्काल सम्पर्क गर्न लगाउने, लक्षण वा अन्य स्वास्थ्य अवस्था सोध्ने र रेकर्ड राख्ने गरेका छन्। महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार अधिकांश संक्रमण पहिचान भएकाको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान भइसकेको बताए।
‘विभिन्न उडानबाट आएकामध्ये अधिकांशको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खासै समस्या भएन,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि स्थलमार्ग र सीमा नाकाबाट आएकाहरूमा त समस्या छ।’
‘अध्यागमन, प्रहरी, स्वास्थ्य संरचना, स्थानीय सरकार सबैको साथ लिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलसनमा पठाउने गरेका छौं,’ डा. पाण्डेले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने ।
सरकारले विभिन्न माध्यमबाट विदेशबाट आएकालाई सम्पर्कमा आउन गरेको आह्वान, सफ्टवेयरमार्फत् उनीहरूको विवरण भर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि धेरै मानिस सम्पर्कमा आएको डा. पाण्डेको भनाइ छ। ‘विभिन्न उडानबाट आएकामध्ये अधिकांशको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खासै समस्या भएन,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि स्थलमार्ग र सीमा नाकाबाट आएकाहरूमा त समस्या छ।’
उनका अनुसार अहिले स्थानीय सरकार, प्रहरी सबै सचेत भएर गाउँगाउँमा यस्ता मानिसको खोजी गर्ने र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा कडाइ गर्ने अवस्थामा बढोत्तरी भएको छ।
महाशाखाका अनुसार अहिले तीनदेखि पाँचजना सदस्य रहेको १३ समूह कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटिएको छ। इडिसिडीलाई यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्राविधिकले समेत सघाइरहेका छन्। तीबाहेक मन्त्रालयका एप्स, सामाजिक सञ्जाल र १११५ र ११३३ नम्बरमार्फत् पनि धेरै मानिस सम्पर्कमा आइरहेको स्वस्थ्य अधिकारीको भनाइ छ।
स्वास्थ्य अधिकारीले सक्दो प्रयास गरिरहे पनि संक्रिमतको सम्पर्कमा आएकाको पहिचान गर्न हम्मे परिरहेको छ। यतिसम्म कि नेपालमा भेटिएका नौ संक्रमितमध्ये तीनजना कतार एयरवेजको उडान नम्बर क्युआर६५२ बाट दोहा हुँदै चैत ४ मा नेपाल आएका थिए। उनीहरूसँगै आएका १ सय ५८ मध्ये पाँचजना अहिलेसम्म सम्पर्कमै आएनन्। त्यसमा रहेका पाँच विदेशीसहित अन्य भने सम्पर्कमै रहेर स्वास्थ्य परामर्श र अपडेट लिइरहेका छन्।
सोही उडानबाट आएकामध्ये मैतीदेवीकी १९ वर्षे युवती र बाग्लुङकी अर्का १९ वर्षे युवती तथा ६५ वर्षे महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। विश्व स्वस्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार विमानमा अगाडिपछाडी र दाँयावायाँ बसेकाहरुको पहिचान गरेर परीक्षणसमेत गरिसकेको इडिसिडिका अधिकारीको भनाई छ ।
तर उनीहरुले चैत ४ मा यती एयरका उडानबाट पोखरा, विमानस्थलबाट ट्याक्सीमा बसपार्क गएर स्कार्पियोमा बाग्लुङ गएका थिए । ती दुई महिलासँग सम्पर्कमा आएकाहरु सबैको पहिचान नभएपनि समुदायमै परीक्षण सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । मैतीदेवीकी युवतीका घरपरिवारको पनि नमूना परीक्षण नेगेटिभ आइसकेको छ ।
ती युवा एक दिन काठमाडौं बसेर भोलीपल्ट काठमाडौंबाट बुद्ध एयर चढेर नेपालगन्ज पुगे। नेपालगन्ज विमानस्थलबाट इरिक्सा चढेर कोहलपुर पुगे। उनी कोहलपुरबाट माइक्रोबस चढेर अत्तरिया र अत्तरियाबाट मिनिबसमा धनगढी पुगेका थिए। यसबीचमा उनको सम्पर्कमा आएकालाई मिति र समयसहित सरकारले लक्षण देखिए सम्पर्कमा आउन आह्वान गर्नेबाहेक केही गर्न सकेको छैन।
त्यसैगरी चैत ६ गते धादिङका ३२ वर्षे पुरुष युएईको शारजहाँबाट एयर अरेबियाको उडान नम्बर जि९५३७ मा काठमाडौं आए, होटलमा बसे। उनलाई पनि संक्रमण देखियो। उनले काठमाडौमा रहँदा साथीभाईलाई पार्टीसमेत दिन भ्याए। सोही जहाजमा सवार १ सय ७० मध्ये अझै केही सम्पर्क बाहिर छन्।
चौथो संक्रमित धनगढीका ३४ वर्षे युवा दुबईबाट नयाँदिल्ली हुँदै भिस्टारा एयरलाइन्सको जहाजबाट काठमाडौ ओर्लिएका थिए। उनीसँग सोही जहाजमा १ सय ३० जना सवार थिए। त्यसमा सवार केही अझै सम्पर्कमा छैनन्।
ती युवा घर पुगेको केही दिनमै संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीमार्फत् नै नेपालमा कोरोना संक्रमण दोस्रो स्टेजमा प्रवेश ग-यो। उनकी ३४ वर्षीया भाउजु पनि संक्रमित भइन्। जुन नेपालमा समुदायमा सरेको पहिलो केस थियो।
अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रयोग भइरहेका इरिक्सा, माइक्रो र मिनिबसको सम्पर्क भएकाको पहिचान हुन नसकेको इडिसिडीका अधिकारीहरू बताउँछन्।
हवाईमार्गबाट आएकहरूकै सम्पर्क स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आएका दुई युवामा संक्रमण भेटिए पनि महामारी नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारीहरू झन् सशंकित छन्।
खासगरी चैत २२ मा संक्रमण पुष्टि भएका तर चैत १४ मा उत्तराखण्डबाट आएका कन्चनपुरका ४१ वर्षे पुरुष र चैत १२ मा भारत मुम्बईबाट गौरीफन्टा हुँदै कैलाली छिरेका २१ वर्षे युवाका सम्पर्कमा आएकाको पहिचान चुनौतीपूर्ण छ।
२१ वर्षे ती युवा सरकारले लकडाउन गरेर सीमा बन्द गरेपछि त्यसको विरुद्ध सीमा नाकामा सयौंले गरेको प्रदर्शनमा सरिक थिए। यद्यपि, सरकारी अधिकारीले उनीसँगै आएका १३ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको बताएका छन्।
यीबाहेक स्थलमार्ग हुँदै भारतबाट आएका र तिनको सम्पर्क खोजीका लागि नागरिक तहमै जागरण र स्थानीय सरकारमा जिम्मेवारीबोध महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
इडिसिडीका प्राविधिक लीलाविक्रम थापाका अनुसार एकभन्दा बढी केस भेटिएका र स्थानीय तहमा संक्रमण फैलिएका धनगढी र बाग्लुङमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि काठमाडौबाट चिकित्सकसहितको टोली नै पठाइएको थियो।
उनले भारतबाट नेपाल आएर संक्रमण प्रमाणित भएका दुई व्यक्तिको सम्पर्कको जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत् भारत सरकारलाई समेत उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।
इडिसिडीका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय नामका आधारमा बसेको स्थान ट्रेसिङ गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल टेलिकममा निवेदन दिइसके पनि सुनुवाइ भएको छैन। प्रहरीले सिमकार्डका आधारमा व्यक्तिको निगरानी र डिटेल खोजी गर्न सक्ने भए पनि गोपनियताको कारणले त्यो प्रक्रियामा पनि सरकार प्रवेश गरेको छैन।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि खटिएका विभिन्न समूहमध्ये एक समूहका संयोजक डा. प्रकाश बुढाथोकीले सम्पर्कमा ल्याउन केही समस्या भएको सुनाए।
उनका अनुसार सम्पर्कमा ल्याउन नसकिएका अधिकांशमा पासपोर्ट बनाउँदा उल्लेख गरिएको फोन नम्बर परिवर्तन हुनु, सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नहुनु, पासपोर्ट लिएको ठेगनामा हाल बसोबास नहुनु र सिमकार्डका आधारमा व्यक्तिको स्थान पहिचान गर्न सहज नहुनले समस्या परेको छ।
‘प्रहरीले नि खोज्ने, स्थानीय सरकारले नि खोज्ने, हामीले पनि खोज्ने गर्दा केही मान्छेले हैरान महसुस गरेको पनि पायौं,’ डा. बुढाथोकीले भने।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलले मंगलबार आफ्नो संवोधनका क्रममा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि छुट्टै सफ्टवेयरबारे सोचिरहेको बताएका थिए। तर, पनि स्वास्थ्य अधिकारीहरू सफ्टवेयर बनाउने सोचेर मात्रै हुने अवस्था नभएको भन्दै प्रभावकारी रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘देशव्यापी संरचना र कानुनले पालना गराउने प्रमुख निकायका रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नेतृत्व प्रहरीलाई नदिएसम्म प्रभावकारी हुन्नँ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले स्वास्थ्यबाट भनिए पनि क्वारेन्टाइनको पालना गर्न अटेर गरिरहेका छन्। प्रहरीले खोज्ने र पछि स्वास्थ्य काउन्सिलिङका लागि बल्ल स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मा दिनुपर्छ।’